नेपालमा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै !! | Saptaritoday
Home राशिफल नेपालमा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै !!
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १०:०२
नेपालगञ्ज । तिव्ररुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको छ । देशभर लकडाउन घोषणा नगरिए पनि नेपालगञ्ज शहर सहित बाँकेमा लकडाउन गरिने भएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको सर्वदलिय बैठकले बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमण घटाउन बिहीबारदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछाडि पोस्टडिक्काद्वारा पत्रकार महासंघमा निर्वाचित मण्डल सम्मानित
अगाडि पोस्टआज धेरै इन्जिनियरहरुको एउटै प्रश्न भोट किन? र के को लागि?